IINGCAMANGO EZILI-101 EZIPHEZULU ZETATTOO ZAMAKRISTU- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcamango ezili-101 eziphezulu zeTattoo zamaKristu- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ukholo yinto exabisekileyo ethwelwe ngamadoda azinikeleyo ngawo onke amaxesha, kwaye umvambo wobuKristu uyakukhupha uThixo ngawo onke amaxesha. Ngelixa i-inki inokubonakala ngathi iyinxalenye yeculterculture, ezi visa ezingcwele zibonisa ukuba ubugcisa bomzimba benzelwe amakholwa ngokwenene!
Iitatto zamaKristu zihlala ziqhubeka zithandwa, kwaye ayisiyomnqamlezo kuphela okanye iminqamlezo. Imifanekiso yezakwalizwi ngoku iyilelwe kwezona zoyilo zibalaseleyo zobugcisa zakha zamkelwa.
Ezi zigcawu zibandakanya ukudibana nabapostile kunye neefoto zikaYesu zakudala. Uphawu oluhle lokomoya luya kukugcina kwindlela elungileyo kwaye likukhumbuze ukuba ungaphambuki. Inokude ikhulule izono zakho ukuvula amasango ezulu.
Ewe, iiTattoo zamaKrestu ezininzi zinamalungu asuka eBhayibhileni. Isibhalo sinokuba nentsingiselo enzulu yobuqu, ke umntu okhanyiselweyo kufuneka athathe umthandazo obaluleke kakhulu kuye. Iindumiso zenza iitatoo zamaKristu ezinokucaphuka, kodwa unolawulo olukhululekileyo lokukhetha isicatshulwa kwiTestamente eNdala nakwiTestamente eNtsha.
Ngaba uyakholelwa ukuba ekugqibeleni zikho iitattoos ezivunywa yiNkosi buqu? Masithi sonke ngokudibeneyo, Haleluya! Ukubhiyozela le ndlela yokuqhubela phambili kunqulo lwefashoni, sebenzisa nje le khathalogu ilandelayo yemisebenzi ye-inki enobubele kuKristu!
1. Ingalo yangaphambi kweChristian Tattoos
Ngelixa abantu abaninzi besongelwa kuyilo kunye nokubaluleka kwe tattoo, elinye icandelo lalo naliphi na tattoo elungileyo elifunayonjeukuqaphela okuninzi kukubekwa.Kubantu abaninzi,useto lobuchule kunye nesimo sengqondo samalungu osapho zizinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokufaka i-inki.
Inkqubo ye- ingalo yindawo entleIitattoosngenxa yokuba umntu onxibayo ekwazi ukuyalela xa itattoo ibonakala okanye cha. Ngaphandle ebharini, usela ezinye iibhiya kunye namakhwenkwe? Yikhuphe yonke. Ukuya ecaweni ngeCawe no gogo? Qengqeleka phantsi imikhono kwaye ulumke kwiimvakalelo zakhe. Ezi ziitatoo ezintle zamaKristu ezibonakala zigqibelele kwingalo yangaphambili.
2. UKrestu emnqamlezweni iiTattoos
Mhlawumbi elona gama lichazayo kwisithethe sobuKristu lidini elenziwa nguYesu. Ngokuzivumela ukuba abethelelwe emnqamlezweni, uYesu wakwazi ukuzalisekisa isiprofetokwayevumela amaKristu ukuba afumane uxoleloivela kuThixo.Idini lakhe elenzelwe uluntu lenziwa nangakumbiidrama byinyani yokuba yayingumntuunobubeleabo bazamile, bagweba kwaye babulala kanyeumntuowayefela ukubasindisa.
Ngenxa yokubaluleka kwesi siganeko, ayimangalisi into yokuba sinasoseleukukhuthazwa kwemisebenzi emininzi yobugcisa,kubandakanyaIitattoos.VulaKwayeUmtsalane we tattoo onomdla ubeka uKristu kwingalo yangaphambili kwaye asebenzise umbono onyanzelekileyo ukudalaukuyaubunzulu obuvumela isandla somntu owinxibileyo ukuba sibonakale singuYesu '. Oku kudala ubudlelwane phakathi kukaYesu nomntu onxibileyo obonwa ngokukhawuleza.
Fokanye iinkulungwanetIngalo yakhe ephezulu ibiyindawo eyaziwayo yokufumana iitatto ngezizathu ezininzi. Okokuqala, ubungakanani obukhulu xa kuthelekiswa nomphambili benza ukhetho olufanelekileyo olukhuluIitattoos. Imisipha ye-biceps kunye ne-triceps ikwabonelela ngamagcisa ngemigca yendalo enokuthi ibandakanywe kuyilo. Okokugqibela, ukubekwa phezulu engalweni kunika umntu onxibayo ngokubona ngakumbi malunga nokuba ngubani ongayiboniyo i-inki yakhe. Ezi ziqwenga zibonisa ukuba zinomdla kangakanani Iitatto zamaKristu inokubekwa kwingalo ephezulu.
4. Umkhono opheleleyo weTattoos zamaKristu
Iimbono zoyilo lwangaphakathi kwigumbi lokulala
Abanye abantu bafumana iitattoo kwimizimba yabo bengacingi kangako ngendlela iziqwenga ezingafaniyo eziya kufakwa ngayoo uyilo olukhulu ezantsi kwendlela;kwaye akukho nto iphosakeleyo kuloo nto. Kwabanye nangona kunjalo, bakhetha ukufumana iitattoos ezinkulu, ezidibeneyo apho zonke izinto kunye nemifanekiso zisebenza kunye ukwenza uyilo olunye, olumanyeneyo.
Le ingalo igcwele, Mkristuimikhono yimizekelo egqibeleleyo yesi sicwangciso.Ingalo ikulungele ngokugqibeleleyo oku kukhuluiziqwenga zibulela indlela umzobi anokusebenzisa ngayo imigca yendalo yeingalo ukuzoba ilisophezulukunye nokuhla ngokupheleleyo kweqhekeza, ukwenza i-tattoo enamandla ngakumbi kwinkqubo.
5. Emva umKristu Tattoos
Umva ngowona useyile inkulu kuwo wonke umzimba, kwaye ngenxa yoku, ulusu olukhulu, olungaphazanyiswanga ngasemva lolona khetho lubalaseleyo kwiitattoos ezinkulu.Aba bazobi basebenzisa usetyenziso olugqwesileyo lwe-inki emnyama kunye ne-gray shading shading yokwenzaintleIitattoo ezisebenzisa indlela eyiyo yokufotakunyeNgekholaji enzima, enje ngokuqamba ukubamba imiboniso eyahlukeneyo efumaneka kumabali eBhayibhile.UYesu, unina uMariya, kunye naBafundi abalishumi elinesibini bonke banokufumaneka kwezi ziqwenga ziphefumlelweyo zizithethe zamaKristu.
6. Icala kunye neChestst Christian Tattoos
Umkhwa okhulayo kwihlabathi le tattoo ubona abantu abaninzi ngakumbi nangakumbi besebenzisa icala lomzimba njengendawo yokufaka i-inki. Ngaphandle komva, icala lelinye lezinto ezinkulu ezinokubakho emzimbeni kwaye linomdla kwizizathu ezimbalwa. Imilo yesifuba, ubushushu bembambo kunye nesisu zibonelela ngegcisa kwimigca emininzi enomdla yokuyifaka kumvambo ngelixa uneNguYesukwicala lakho longeza omnye umaleko wobunzulu koku kubekwa.
Inkqubo ye- Isifuba ikwayindawo eyaziwayo yeetattoos zamaKristu enkosi ngethuba lokubeka le mifanekiso yobuqu ngokunzulu ngentla kwentliziyo yalowo uyinxibileyo.Ezi ziqwenga ziyimizekelo emihle yendlela uyilo lobuKristu olunomtsalane olunokujonga ngayo esifubeni nasecaleni.
7. Isandla samaTattoos
Hayi kudala ukuba namathambo ezandleni zakho kwakuthetha ukuba usisaphuli-mthetho okanye umatiloshe. Oku akusekho njalo. Ngokuduma kwehlabathi kunye nokutshintsha ibala lentlalontle elijikeleze i-inki, abantu abaninzi baya bekhetha ukufumana ii-tatoo ezandleni zabo, kwaye ezi uyilo lobuKristu ziyimizekelo emihle.Ukususela kumaqhekezatsaliweukusuka Imveli yaseMelika oonotsheluza, kwiindlela ezinesitayile ngakumbi, ezimnyama nezimvi, iintlobo ngeentlobo zeetatto ezinokusetyenziswa ngempumelelo ezandleninguiyamangalisa.
8. Umlenze weTattoos zamaKristu
Imilenze yenye indawo yeetatto ezibonakala ngathi ziyanda kakhulu kule minyaka idlulileyo. Abanye abantu bakhetha ukufumana ii-tatoo zomlenze ngenxa yokukwazi kwabo ukuyalela ukuba ngubani obona i-inki yakhe kwaye ngubani ongayiboniyo; Abanye abantu bayaqhubeka neminqweno yabo yokugubungela imizimba yabo yonke kwiiTattoos.Nokuba siyintoni na isizathu, imilenze yenza imizobo emihle embalwaizizathu.
Okokuqala, zikhonaIindawo ezahlukeneyo, ukusuka kumathole nasemaqatheni, ukuya kwizihlunu zethanga ezinkulu kakhulu ezinokuhlalauyilo olukhulu, yenza lUmzekelo ukhetho olukhulu. Imilenze ikwasebenza njengeziseko zayo yonke imizimba yethu, yongeza ukubaluleka xa ufumana imifanekiso ebalulekileyo enjengale yoyilo lobuKristu lusetyenziswa emilenzeni.
9. Isithuba esingalunganga samaTattoos obuKristu
Xa usebenzisa umnyama nengwevu, igcisa linqunyelwe kwisikimu sombala ukuze babenobukrelekrele kwindlela yabo yokwenza umvambo onomdla. Ukusetyenziswa kwesithuba esingalunganga kubaluleke kakhulu ngokubhekisele ekwenzeni umvambo omnyama nampunga onokuthi ubambe iso kwaye ujike iintloko.
I-inki emnyama egcweleyo yenza iithoni ezimnyama kwisiqwengana, ngelixa ulusu olungafakwanga lubonelela ngendawo engalunganga tUnayoYenza elinye icala lesiphelo esetyenziselwa izinto eziphambili. Olu luyilo lobuKristu yimizekelo ebalaseleyo yendlela ebaluleke ngayo indawo engalunganga xa usenza enyezohlobomnyama nengwevuIitattoos.
10. Intombikazi kaMariya Tattoos
Emva kukaYesu, iNtombikazi uMariya uMariya mhlawumbi ungoyena mntu ubalulekileyo kubuKristu. Kwezinye izithethe-ubuKrestu baseMexico ngokuthe ngqo-uMariya unikwa ukubaluleka okuphantse ukusithwa yinyangaleyo yeNguYesu.I-Immaculate Conception lelinye lawona mabali abaluleke kakhulu kubuKrestu kwaye iyenziwa kwiicawe kwihlabathi liphela minyaka le ngeKrisimesi.UEva.
Intombikazi enguMariya ngumntu ongumama we-archetypal, okhoyo ngonaphakade ukumamela abo baphulukene nendlela yabo, ebakhuthaza ukuba babuyele emhlambini. Akumangalisi ukuba abe sisifundo esithandwayo kwiitattoos zamaKristu kwaye ezi ziqwenga zibonisa ukuba zinomdla njani kwezi zoyilo.
11. Iitattoo zikaYesu
Ngelixa abantu abaninzi bedibanisa uYesu nelona dini lakhe ligqibeleleyo kunye nembonakalo eyoyikisayo kaKrestu emnqamlezweni, ibhayibhile izele ngamabali agqamisa iimfundiso zoxolo nemfesane ezazibonisa umyalezo ka Yesu.
UYesu wayeyindoda eyayineempawu ezahlukeneyo kunye neziphene enye: ekuhlambeni iinyawo zomfundi wakhe, ukuguqula imalir etempileni, uYesu wayengaphantsingokukodwa umntu.Enkosi kubazobi abanetalente, ezi zoyilo zibamba ngokuchanekileyo iinkalo ezahlukeneyo zikaYesu KrestuNgelixa kusenziwa iitattoo ezintle ngaxeshanye.
12. Ukuthandaza iiTattoos zezandla
Izandla ezibini, zidityaniswe zathandaza. Kuzo zonke iinkolo kunye neenkolelo, ukusuka kubuBhuda ukuya kubuKrestu, ubuhedeni ukuya kubuSilamsi, oku kubonisa ukubonakaliswa komthandazo kunye nentlonipho.Ezi ziqwenga zisebenzisa amaso erosari njengendlela yokuchonga ngobuKristu, kwaye inqanaba leenkcukacha kwezi tatto ziyamangalisa. Ngokusetyenziswa kokumnyama okugudileyo okumnyama nangwevu la magcisa ayibamba ngokugqibeleleyo olu phawu lubonakalayo lokholo.
13. Iingelosi zeTattoos
Kwisithethe sobuKristu, iingelosi ziimpawu zokholo olupheleleyo, ukuzinikela, ukuthembela nothando. Bahlala bebonwa njengabamntu kwezi mpawu kwaye basebenze njengemodeli yendlela abalandeli beU-Kristu ufanele ukubuphila ubomi babo. Ngaphandle kolu phawu ngokubanzi, zine iingelosi ezinkulu, nganye inokubaluleka kwayo okukhethekileyo.
UMichael ngowokuqala, kwaye umele amandla, ingqibelelo kunye nokukhuselwa. UGabriel ngumthunywa kaThixo, ngelixa uRafael edibene noogqirha kunye nokuphilisa.Urielunomsebenzi wokubonisa umntu umahluko phakathi kokulungileyo nokubi. Ndiyabulela kwezi ntsingiselo zahlukileyo abantu abaninzi bakhetha ukufumana i-tattoo enkulu.
Jonga amakhonkco angezantsi kwezinye iigalari ezijolise kuluhlu lwemixholo yobuKristu:
Iimbono ezingama-51 ze-3D zeTattoo zikaYesu
I-101 yeNtombikazi kaMary Tattoo Designs
Iingoma ezingama-63 eziPhezulu zokuThanda iiTatoo
Uyilo lweTatoo ye-3D
uyilo lwe tattoo lwegqabi ezine
izimvo zangasese ezimnyama nezimvi
Izimvo zomthi weplanga emva kwendlu
unxiba ntoni ekuvukeni
Iingelosi zamaphiko ephiko entanyeni kubafana
ubuhle bakhe irhamncwa lamvambo
umkhondo wezibane kwigumbi lokuhlala